Home » Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာ
ကဘာမပျက်ခင် နောက်ဆုံး ညစာ စား ဆို
ဘာနဲ့ စားရဘ လို့ တွေးမှာ မဟုတ်ဘူးလားဟွင်
နာ့ ကို ဒေါက်ဖြုတ်တယ် ကျန်းးး
အယ်နီညိုဆိုတာ မော်ရင်ညိုနဲ့ မောင်နှမတော်သလားဆရာ
အာ့တွေ ကြားမိတိုင်း တရားသာ ပြေးထိုင်ချင်မိတော့တယ်..
အိုပါးတို့ရှိတဲ့ ကိုရီးယားမှာ အခြေချမှဘာ…
ECONOMY | 2015-06-25
Nay Shwe Thway Aung addedanew photo to the album: ★ The Most Precious Memories ★.
ဒီလို အချိန်မှာ ကောင်းသော ပံ့ပိုးခြင်း၊ ပူးပေါင်းခြင်း များ အတွက် မည်သူ့ကို မဆို လေးစား ပါတယ်။
ဧပြီ ၁ရက်နေ့ဒေါ်စုတက်လာရင်.. (အကြီးဆုံး)ကရက်ဒစ်တွေ.. ဖိုးလပြည့်ဆီသွားလိမ့်မယ်..။
ဇွတ် ကို နေရာ ရ ချင်နေဒါလားး
၁၉၉၀ က.. အဖွဲ့ချုပ်အခုလိုနိုင်ခဲ့ဖူးတယ်..။
တပ်ကအာဏာမပြောင်းပေးလည်း.. လူထုက.. ဘာမှလုပ်မရဘူးလို့ပြောချင်မိတယ်…။
ဒါမိုးတေ များများတင် သပ်လား
နိုင်ငံ့အကြီးကဲ ဖြစ်မဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ လက်မှတ်ဟာ
ငုရင်ကိုပဲ… ရအောင်ယူပါဦး ဗိုက်ဗိုက်ရယ်..။
နေရာဆိုတာ ယူချင်တိုင်း ယူလို့မရပါဘူး သမီးရာ။ :-))
မသိဘူး… အဲ့မျောက်လောင်းကို ကျေးဇူးရှင်လုပ်နေတာတွေ တစ်စက်လေးမှ ကြည့်မရဘူး အရီးရာ…
လေရဲမိုး တို့ ကို တိုက်ဖို့ အင်အား တိုးတာပေါ့။
တကယ်တော့ အဲဒီ ကလေး တွေ က တော်တော် မှာ သူတို့ ပါတ်ဝန်းကျင် က ဘုရင်လို ပင့် မပြီး စိတ်ဓာတ် ကို ဖျက်ထားခံရလို့ပါ။
ကိုဘစိုးတို့အုပ်စု .. ဒီတခါတော့..တက်ခ်တစ် တော်တော်မှန်သွားတယ်..။
ဟိုမှာဖက်က.. ပန်းရောင်မရင့်တရင့်တွေတောင်.. ခဏလောက်.. ပါးစပ်အဟောင်းသား.. ဖြစ်သွား… ဖြစ်သွား..။
အရူးချီးပန်း တက်ခ်တစ် လား။
၂၀၁၅ ဆိုတာ ကွန်ဆွပ်ရှင် လုပ်ငန်း တေ နားကားတဲ့နှစ်
သာမန်အားဖြင့် တိုင်းပြည်တပြည်ရဲ့ လုပ်အားဈေးကွက်နဲ့.. ငွေရင်းမြစ်ဈေးကွက်က.. ကွန်စရပ်ရှင်နဲ့အိမ်မြေဈေးမှာ မှီတည်နေတယ်..။
ဆိုတော့… ဂျိုးတို့.. ဒီလောက်ညံ့မယ်.. မထင်..။
ဘယ်ကနေ မ လာလဲ သူကြီးမင်း။
အနည်းဆုံးတော့ အရီးလတ်ရဲ့.. ကိုယ့်မျက်စိကိုယ် စိတ်ချယုံကြည်မှုတော့ မြင်သာသွားသပေါ့..
ကာလာဘလိုင်းသမား တွေ ဆိုရင် ဘယ်လို လုပ်မတုန်း သူကြီးမင်းရဲ့။
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3352406/Scotland-Yard-mocks-Trump-s-claims-London-police-terrified-Muslim-areas-officers-claim-tycoon-RIGHT.html#ixzz3trYTJtgE
ယူအက်စ်မှာလည်း ပြုတ်မှာပါ အရီးလတ်ရယ်..။
သူကြီး တို့ ဆီကဘဲ မစ္စတာ အာနိုး ကြီး က carbon emission တွေ နဲ အောင် လူတွေ အသားစားလျှော့ (အဓိက -အမဲသား) ပြီး အသီးအရွက် မျှ စားဖို့ တဲ့ ဗျို့။
ကမ္ဘာကို ဂေဟပျက်အောင် ဖျက်ခဲ့တာ.. ယူအက်စ်နဲ့ အခုတိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကြီးတွေပါ…။
Transition Team များ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်
ညှူ့ မသုံးဖြစ်ဖို့မျှော်လင့်တယ်ဆိုတာကိုက… သုံးချင်သုံးမယ့်သဘော…။
လောလောဆယ် ယူအက်စ်ကမြန်မာဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ချခ်ျ၊ဗလီတွေကို အကြမ်းဖက်မယ် ထောက်လှမ်းရေးသတင်းတက်နေလို့(ဆိုလား) ပြင်ဆင်ရေးစလုပ်နေပါရဲ့..။
အော်.. အင်း.. အမေရိကား…
အခုတော့ သူကြီးမင်းတို့ နေရပ်မှာ ကလေးကျောင်းတွေ ပါ ပိတ်ပါပေါ့။ ပိပိလေး တို့ ကျောင်းရောပိတ်တယ်လား။
ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP က ထုတ်ဝေလိုက်တဲ့ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ် လူသားဖွံ့ဖြိုးမှုညွန်းကိန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို အဆင့် ၁၄၈ သတ်မှတ်ပြီး ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်းပါးနိုင်ငံစာရင်း ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေ ထဲမှာ မြန်မာပြည်က အနိမ့်ဆုံးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ ၁၈၈ နိုင်ငံပါဝင်တဲ့ အဲဒီစာရင်းကို ၁။ ဖွံ့ဖြိုးမှု အလွန်မြင့်မားသောနိုင်ငံများ၊ ၂။ ဖွံ့ဖြိုးမှုမြင့်မားနိုင်ငံများ၊ ၃။ ဖွံ့ဖြိုးမှုအလယ်အလတ် နိုင်ငံများနဲ့ ၄။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနည်း ပါးနိုင်ငံများဆိုပြီး အုပ်စု ၄ ခုခွဲထားပါတယ်။
”ရေဘူးပေါက်တာမလိုချင်ဘူး၊ ရေပါ တာပဲ လိုချင်တယ်ဆိုတာကို လုံးဝမလို ချင်ဘူး”
Hmuu Zaw with Ye Htut and2others.
မြန်မာပြည်လမ်းတွေနဲ့.. ပြောင်းပြန်ကြီးဖြစ်နေတဲ့.. လက်ယာစတီယာရင်ကားတွေကြောင့် အပြစ်မဲ့လူ့အသက်တွေဘယ်လောက်ဆုံးရှုံးခဲ့ဖူးသလည်း… စစ်တမ်းထုတ်ချင်မိတယ်…။
အဲ့ဒီ ဥပဒေ ထွက်လာပြီးနောက်ပိုင်း….
အဓိကက.. စိန့်ပြည်…။ ထိုင်း…။